Phyu Phyu Thin Sympathizer: 07/01/2007 - 08/01/2007
0 comments at 5:21 AM Labels: General news
0 comments at 9:55 PM Labels: General news
၁။ လွတ်ရက်စေ့ပေမယ့် ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှထောင်တွေထဲမှာပဲ သောင်တင်နေရတဲ့ မြန်မာပြည်သားတွေအကြောင်းဗျာ။ ပြီးတော့ ဘီဘီစီသတင်းဟောင်းတပုဒ်လည်း တင်ပေးလိုက်တယ်။ စိတ်ဝင်စားသူများ ဆက်ဖတ်ဖို့။
၂။ ပင်လယ်ပြင်မှာ ယိုးဒယားတွေလည်း အဖမ်းခံရတာ ရိုးနေပြီ။ ထိုင်းအစိုးရက တယောက်မကျန် သွားထုတ်တာပဲ တဲ့။ ယိုးဒယားတွေများ တယ်ကံကောင်းသကိုး။
၃။ ကျနော်တို့ရဲ့အစိုးရ NCGUB က ဒီဖြစ်ရပ်နဲ့ပတ်သက်ပြီး နည်းနည်းပါးပါး ၀င်ပြောသင့်တာပေါ့။ အင်း - ပြောပြီးသားဖြစ်မှာပါ။ ကျနော်တို့အစိုးရက လူတွေကို တန်ဖိုးထားတဲ့ အစိုးရ မဟုတ်လား )
မြန်မာနိုင်ငံ အကျဉ်းသား ၄၀၀ အိမ်ပြန်ခွင့်မရ
ဇူလိုင်လ ၂၉ ရက်၊ ၂၀၀၇ ခုနှစ်။
ဘင်္ဂလာဒေခ်ျ့ အကျဉ်းထောင်ထဲတွင် ရှိနေသော လွတ်ရက်စေ့ မြန်မာနိုင်ငံသား အကျဉ်းသား ၄၀၀ မှာ မြန်မာစစ်အစိုးရက လက်ခံယူရန် ငြင်းဆန်နေသဖြင့် ရွှေပြည်တော် မျော်တိုင်းဝေး ဖြစ်နေကြရကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
ထောင်အာဏာပိုင်သူ တဦးဖြစ်သူ ဗိုလ်မှူးချုပ် ဇာကီယာဟာဆန်က မြန်မာနိုင်ငံသား ၄၀၀ သာမက တခြားနိုင်ငံသား ၆၀၀ နီးပါးခန့်မှာလည်း သက်ဆိုင်ရာ နိုင်ငံများက လက်ခံရန် ငြင်းဆိုနေသဖြင့် အိမ်မပြန်နိုင်ဘဲ ဖြစ်နေကြရကြောင်း သတင်းထောက်များကို ပြောဆိုသည်။သူတို့မှာ လွတ်ရက်စေ့နေသဖြင့် ပြန်လည်လက်ခံယူဖို့ သက်ဆိုင်ရာ နိုင်ငံခြား သံရုံးများသို့ အကြောင်းကြားသော်လည်း သံရုံးများ အနေဖြင့် လက်ခံယူရန် စိတ်မ၀င်စားဘဲ ဖြစ်နေကြောင်း သူကပြောသည်။ထိုသို့ ဖြစ်နေခြင်းမှာလည်း နိုင်ငံခြားမှ ထောင်ကျနေသူများတွင် သက်ဆိုင်ရာ နိုင်ငံသား ကဒ်ပြားနှင့် ခိုင်လုံ၍ အထောက်အထားမရှိ၍ ဖြစ်ကြောင်း သူကပြောဆိုသည်။ သို့အတွက် ဘင်္ဂလာဒေခ်ျ့ နိုင်ငံ အနေဖြင့် သူတို့ အစားအသောက် အတွက် နှစ်စဉ် တာကာငွေ ၁၀ သန်းကျော် အသုံးပြုနေကြရကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
ယခုသက်ဆိုင်ရာတိုင်းပြည်များသို့ မပြန်နိုင်ဘဲ ဘင်္ဂလာဒေခ်ျ့ ထောင်များထဲတွင် ရှိနေသော ထောင်သားများမှာ မြန်မာနိုင်ငံသား ၄၀၀၊ အိန္ဒိယ နိုင်ငံသား ၂၀၀ နှင့် တခြားထောင်သားများမှာ ပါကိစ္စတန်၊ နီပေါ၊ မလေးရှား၊ ဆိုဒီးအရေဗီယား၊ ဂါနာနှင့် တန်ဇန်နီးယား နိုင်ငံများ ဖြစ်ကြသည်။ ထိုအထဲတွင် အမျိုးသမီး ၈ ဦးပါဝင်သည်။ ထိုအထဲတွင် အိမ်ရှင်နိုင်ငံများက လက်မခံသဖြင့် လွတ်ရက်စေ့သော်လည်း ထောင်ထဲတွင် နှစ်ပေါင်း ငါးနှစ်ထက် အထက် နေထိုင်နေရသူ နိုင်ငံခြားသား ထောင်သား ၃၀၀ နီးပါးခန့်ရှိကြောင်း ထောင်အာဏာပိုင်များက ပြောသည်။
ဘင်္ဂလာဒေခ်ျ့နိုင်ငံ အနေဖြင့် ၈၆၀၀၀ ခန့်ထောင်သားများ နေထိုင်ရေးအတွက် အဆောင်များ အလုံအလောက် မရှိသည့် အပြင် ဒက္ကားမြို့ ဗဟိုထောင်တွင်လည်း အကျဉ်းသား ၂၇၀၀ ထားရှိမည့်ရော၍ အကျဉ်းသား ၉၀၀၀ ကိုလက်ခံ ထားရှိကြောင်း ဇာကီယာ ဟာဆန်က ပြောသည်။ မြန်မာနိုင်ငံမှအကျဉ်းသား ၄၀၀ မှာ မြန်မာနှင့် ကပ်ရပ်တည်ရှိသော ကော့ဘဇားထောင်နှင့် ဘင်ဒရိုဘင်ထောင်များတွင် ရှိနေကြပြီး အများစုမှာ မြန်မာနိုင်ငံသို့ ပြန်ရမည့် ရက်ကို လက်ချိုးရေတွက်နေကြကြောင်း ကော့ဘဇားထောင်ထဲက များမကြာခင်က လွတ်လာသူ ကိုစံလုံးက ပြောသည်။
မြန်မာစစ်အစိုးရက လွန်ခဲ့သောနှစ်က အကျဉ်းသား ၂၀၀ နီးပါးခန့်ကို ပြန်လည် လက်ခံယူခဲ့သော်လည်း ယခုနှစ်မှ စ၍ တစုံတဦးကိုမျှ ပြန်လည် လက်ခံခြင်း မရှိသေးကြောင်း နယ်စပ်ဒေသက ပေးပို့သော သတင်းများ အရ သိရှိရသည်။
Ties improved withavisit last year by ex-Burma PM Khin NyuntBangladesh and Burma have exchanged nearly 200 prisoners held in each others' jails for crimes including trespassing and smuggling.
They were exchanged followingameeting between border forces of the two countries in Bangladesh's south-eastern town of Teknaf.
An official of the Bangladesh Rifles (BDR) said Bangladesh received 20 of its nationals and returned 172 Burmese.
Correspondents say suchalarge exchange is rare.
The BDR official said the prisoners included some who had been held for nearlyadecade.
About 600 people from Burma and Bangladesh are still imprisoned.
Relations between the neighbours, who sharea320km (200 mile) border, have improved sinceavisit to Bangladesh by then Burmese Prime Minister Khin Nyunt last year.
Relations between the two countries became strained in the early 1990s when more than 250,000 Burmese crossed into Bangladesh alleging military persecution.
Most of the refugees, from the minority Rohingya Muslim community, have since returned, but about 20,000 still remain in camps in south-eastern Bangladesh.
Officials in Dhaka say they wantafull repatriation of the refugees, but several rounds of talks between the two countries have yielded no result.
0 comments at 5:13 AM Labels: Home Affairs
ရိုးမ ၃။ ဇူလိုင် ၃၀၊ ၂၀၀၇
အာစီယံဒေသတွင်း လူ့အခွင့်အရေးအခြေအနေများကို ကိုင်တွယ်ရန် လူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင် တရပ် ဖွဲ့စည်းရေးကို မြန်မာစစ်အစိုးရက သဘောတူညီလိုက်သည်။
ယနေ့ ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံ၊ မနီလာမြို့တွင် စတင်ကျင်းပနေသည့် အာစီယံနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးများ ဆွေးနွေးပွဲမတိုင်မီ အကြိုတွေ့ဆုံဆွေးနွေးစဉ် စစ်အစိုးရက ကန့်ကွက်ခဲ့ရာမှ ယနေ့ဆွေးနွေး ပွဲတွင် သဘောတူညီလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။
အာစီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများသည် အာစီယံပဋိညာဉ်စာတမ်းအား ယခုကျင်းပနေသည့် နိုင်ငံခြားရေး ၀န်ကြီးများ ဆွေးနွေးပွဲတွင် အပြီးသတ်တင်သွင်းရန် ပြင်ဆင်နေခြင်းဖြစ်ပြီး အဆိုပါ ပဋိညာဉ် စာတမ်းအတွင်း လူ့အခွင့်အရေးအခြေအနေများအား ဒေသတွင်းနိုင်ငံများက လေ့လာ စောင့်ကြည့် စစ်ဆေးနိုင်မည့် ကော်မရှင်တရပ် ဖွဲ့စည်းရေးကဏ္ဍလည်း ပါဝင်မည်ဖြစ်သည်။
အာစီယံအနေဖြင့် မတူညီသည့် အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများ၏ နိုင်ငံရေးစနစ်များအကြား သဘောတူညီမှု ရရှိရန် အခြေအနေမှာ ခက်ခဲသော်လည်း ဥရောပသမဂ္ဂကဲ့သို့ ကျစ်လစ်ခိုင်မာသည့် ဒေသတွင်း အစုအဖွဲ့ဖြစ်လာရေးကို အစဉ်တစိုက် ကြိုးစားနေဆဲပင်ဖြစ်သည်။
ဒေသတွင်းနိုင်ငံများအတွင်း လူ့အခွင့်အရေးအခြေအနေများအား ကိုင်တွယ်ရန် လူ့အခွင့်အရေး ကော်မရှင်ဖွဲ့စည်းရေးအဆိုကို ဗီယက်နမ်၊ ကမ္ဘောဒီးယား၊ လာအိုနှင့် မြန်မာစစ်အစိုးရတို့က ကန့်ကွက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
ယခုကျင်းပနေသည့် အာစီယံပဋိညာဉ်စာတမ်းအား ညှိနှိုင်းမှုများပြီးစီးပါက ယခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ စင်္ကာပူနိုင်ငံတွင်ကျင်းပမည့် အာစီယံထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲတွင် အတည်ပြုကာ လာမည့်နှစ်ကုန် ပိုင်းတွင် အာစီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများအားလုံး အဆိုပါပဋိညာဉ်စာချုပ်အား လက်မှတ်ရေထိုးကြ ရမည်ဖြစ်သည်။ စစ်အစိုးရအနေဖြင့် ကုလသမဂ္ဂ လူ့အခွင့်အရေးကော်မတီ၏ မြန်မာနိုင်ငံတွင်း လူ့အခွင့်အရေး အခြေအနေများ တိုးတက်အောင် ပြောဆိုတိုက်တွန်းချက်များကို မျက်ကွယ်ပြုထားသည့်အပြင် နိုင်ငံရေးအရ တက်ကြွလှုပ်ရှားသူများကို ဖိနှိပ်ညှဉ်းပန်းလျှက်ရှိရာ ယခုလ (၂၄) ရက်နေ့တွင် လူ့အခွင့်အရေးလှုပ်ရှားသူ
(၆)ဦးကို နှစ်ရှည်ထောင်ဒဏ်များ ချမှတ်ခဲ့သည်။
0 comments at 5:08 AM Labels: General news
ဧရာဝတီ ဇူလိုင် ၃၀၊ ၂၀၀၇
မွန်ပြည်နယ် သံဖြူဇရပ်မြို့နယ်အတွင်းရှိ ဥစားကြက်ခြံတခြံနှင့် အသားစားကြက်တခြံတို့တွင် H5N1 ကြက်ငှက်တုပ်ကွေး ရောဂါပိုးတွေ့ရှိကြောင်းကို မြန်မာ့အလင်းသတင်းစာတွင် ဖော်ပြထားသည်။
ရန်ကုန်မြို့ ဈေးတဈေးရှိ ကြက်သားရောင်းသူတစ်ဦး ဓာတ်ပုံ - AFP
လွန်ခဲ့သည့်အပတ် အစောပိုင်းက ဒေသခံမွေးမြူရေးနှင့် ကုသရေးဦးစီးဌာနက သံဖြူဇရပ်မြို့နယ်
အတွင်းရှိ မွေးမြူရေးကြက်ခြံများသို့လိုက်လံစစ်ဆေးစဉ် အဆိုပါ ကြက်ခြံနှစ်ခြံတွင် H5N1 ကြက်ငှက်တုပ်ကွေးရောဂါပိုးကို တွေ့ရှိခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း ယမန်နေ့ထုတ် မြန်မာ့အလင်း သတင်းစာတွင် ဖော်ပြထားသည်။
၎င်းကြက်ခြံနှစ်ခြံက ကြက်ကောင်ရေ ၃၀၀ ကျော်ကိုလည်း ရောဂါလက္ခဏာများ တွေ့ရသဖြင့် ဖျက်ဆီး သုတ်သင်လိုက် ကြောင်း သတင်းစာကဆိုသည်။
လွန်ခဲ့သည့်ဇွန်လကလည်း ပဲခူးတိုင်းအတွင်းရှိ ပုဂ္ဂလိက ပိုင်ကြက်ခြံတခြံတွင် H5N1 ကြက်ငှက်တုပ်ကွေး ရောဂါပိုး တွေ့ရှိခဲ့သည်။ မတ်လကုန်ပိုင်းတွင်မူ ရန်ကုန်တိုင်း မင်္ဂလာဒုံမြို့နယ်ရှိ ထောက်ကြံ့တွင် ရောဂါပိုး တွေ့ရှိခဲ့ပြီး ကြက်ကောင်ရေ ၉၀၀ ကျော် သေဆုံးခဲ့သည်။
ယခုပြုလုပ်ခဲ့သည့် ဒေသခံမွေးမြူရေးနှင့်ကုသရေးဦးစီးဌာန၏ စစ်ဆေးချက်များအရ ရောဂါပိုးတွေ့ရှိခဲ့သော ကြက်ခြံနှစ်ခြံမှ အပ အခြားကြက်ခြံ ၆၅ ခြံတွင် ရောဂါလက္ခဏာမတွေ့ရကြောင်းကိုလည်း သတင်းစာတွင် ဖော်ပြထားသည်။
ဒေသခံမွေးမြူရေးနှင့်ကုသရေးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာနက ရောဂါစူးစမ်းရှာဖွေရေးနှင့် ကာကွယ်ထိမ်းချုပ်ရေး လုပ်ငန်းများကို သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန် ကြက်၊ ဘဲ၊ ငုံး မွေးမြူရေးခြံများကို နှိုးဆော်ထားသည်။ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ကြီး၏ စာရင်းများအရ ကမ္ဘာပေါ်တွင် H5N1 ရောဂါပိုးကြောင့်သေဆုံးသူ ၃၁၉ ဦး ရှိခဲ့ပြီး ၎င်းတွင် မြန်မာနိုင်ငံ မပါဝင်ပေ။
We can't go back to Burma yet: said Padaung refugees
0 comments at 10:01 PM Labels: Home Affairs
၁။ ၁၉၃၇ နိုဝင်ဘာ လန်ဒန်ရောက် ပဒေါင်တိုင်းရင်းသားတချို့ရဲ့ပုံဗျာ။ ကရင် ၀က်ဘ်ဆိုက် တခု ကနေ ရတယ်။
၂။ ဓာတ်ပုံထဲက အမျိုးသမီးတစ်ဦးဟာ နတ်စိမ်းမြေမှသည် (Land of Green Ghosts) စာအုပ်ရေးသားသူ ပါစကယ်ခူးသွယ် Pascal Khoo Thwe ရဲ့ အဖွားဖြစ်တယ်လို့ ဆိုတယ်။ မြန်မာပြည်က သစ်ကုလားအုပ်လည်ပင်းပိုင်ရှင် တော်ဝင် ပဒေါင်အမျိုးသမီးတွေ (Royal Padaung Giraffe-Neck Women From Burma) လို့ ကြော်ငြာထဲ ပါပါတယ်။
၃။ အောက်က သတင်းက နည်းနည်းဟောင်းနေပြီဆိုပေမယ့် မဖတ်ရသေးရင် အသစ်မဟုတ်လား။ သိထားရတာပေါ့ဗျာ။)
မြန်မာပြည်သို့ မပြန်နိုင်သေးဟု ပဒေါင်များက ပြော
ဇူလိုင် ၅ ရက်၊ ၂၀၀၇ ခုနှစ်။
ဒုက္ခသည် ပဒေါင် လူမျိုးများကို မြန်မာပြည်သို့ ပြန်ပို့ရန် မြန်မာ စစ်အစိုးရက ထိုင်းအာဏာပိုင်များသို့ မကြာသေးခင်က တောင်းဆိုခဲ့သော်လည်း ပဒေါင်များက မြန်မာပြည်တွင် ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် ဒီမိုကရေစီ အခွင့်အရေး မရမချင်း မပြန်နိုင်ကြောင်း ပြောဆို လိုက်ကြသည်။
၁၉၈၉ ခုနှစ်တွင် ထိုင်းနိုင်ငံ မဲဟောင်ဆောင် ခရိုင်အတွင်း ၀င်ရောက်လာပြီး နမ်းဆွယ် ခေါ် ကရမ်းသာယာ၊ ဟွေ့စုထောက်နှင့် ဟွေပိုးကဲ ကျေးရွာများ တည်ဆောက်ပြီး လူဦးရေ ၆၀၀ ခန့် ရှိသော မြန်မာနိုင်ငံသား စစ်ပြေး ဒုက္ခသည် ပဒေါင် လူမျိုးများကို ပြန်ပို့ရန် အတွက် မကြာခင်းခင်က ကျင်းပခဲ့သည့် ထိုင်း-မြန်မာ နှစ်နိုင်ငံ နယ်စပ် အာဏာပိုင်များ အစည်းအဝေးတွင် မြန်မာ စစ်အစိုးရ ဘက်က တောင်းဆိုခဲ့သည်ကို ပဒေါင်များက မပြန်နိုင်ကြောင်း ပြောဆို လိုက်ကြခြင်း ဖြစ်သည်။
“ကျမတို့ ထိုင်းနိုင်ငံကို ထွက်လာရတယ် ဆိုတာ စီးပွားရေး အတွက် လာတာ မဟုတ်ဘူး။ စစ်ကြောင့် ထွက်ပြေး လာရလို့ ဒီကို ရောက်လာကြတယ်။ ဆိုတော့ ဘယ်လိုပဲ ဖြစ်ဖြစ် မိမိနိုင်ငံကို ပြန်ပို့မယ် ဆိုတာက မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ ကျမထင်တယ်။ မြန်မာ အစိုးရက လှဲ့ကွက် ဆင်တယ်လို့ ထင်တယ်။ ဘာဖြစ်လို့လည်း ဆိုတော့ ပဒေါင် လူမျိုးတွေဟာ သူတို့တွေ အတွက် တိုးရစ် (နိုင်ငံခြားသား ခရီးသည်) တွေ လာကြည့်နိုင်ဖို့ ပြန်ပြီး လိုချင်တာ ဖြစ်နိုင်တယ်” ဟု အမည် မဖော်လိုသူ ပဒေါင် အမျိုးသမီး တဦးက ပြောသည်။
ဟွေ့ပိုးကဲ ရွာသား တဦးကလည်း “ပြန်ပို့မယ် ဆိုရင်တောင် ဘယ်လိုပဲ ဖြစ်ဖြစ် ပြန်ပို့နိုင်တဲ့ အနေအထား မရှိဘူး။ ပြန်သွားမယ် ဆိုရင်တော့ သိပ်မဝေးဘူး။ ဒါပေမဲ့ ထိုင်းနယ်မြေ ဖြစ်တဲ့ ဟွေ့ပိုးကဲမှာ ရွာသားတွေက အိမ်ခြေပေါင်း ၂၀ လောက် အခြေချ ဆောက်လုပ် နေပြီးပြီ” ဟု ဆိုသည်။ ကမ္ဘာလှည့် ခရီးသွားများမှ စိတ်ဝင်တစား လာရောက် ကြည့်ရှုလိုသည့် လည်ပင်းရှည် ပဒေါင် လူမျိုးများသည် ကုလသမဂ္ဂ ဒုက္ခသည်များ ဆိုင်ရာ မဟာမင်းကြီးရုံး (UNHCR) ၏ အစောင့်အရှောက်ခံ အဖြစ် ရပ်တည်ကာ နေထိုင် နေကြသည်။ UNHCR က ထိုင်း အာဏာပိုင်တွေရဲ့ လက်အောက်မှာ အကန့်အသတ်နဲ့ အလုပ် လုပ်နေရတဲ့ အတွက် ကျမတို့ ဒုက္ခသည် ဖြစ်ပေမယ့် စခန်းအပြင်မှာ ရောက်နေတော့ သူတို့လည်း တာဝန် မယူနိုင်ဘူး။
ထိုင်းဘက်မှာဆိုရင်လည်း သူတို့လိုမျိုး ခံစားခွင့်လည်း မရပြန်ဘူး။ ဘာဖြစ်လို့လည်း ဆိုတော့ ကျမတို့က သူများ နိုင်ငံမှာ၊ သူများ ရွာမှာ သွားနေပြီးမှ ဟိုမရောက် ဒီမရောက် ဖြစ်နေကြတယ်။ အခု ဘယ်အချိန်မှာ ဘယ်ကို ပြောင်းရွှေ့ရမယ် ဆိုတာလည်း အတိအကျ မသိရပါဘူး” ဟု ပဒေါင် အမျိုးသမီးက ပြောသည်။
ပဒေါင်များက UNHCR အနေဖြင့် တစုံတရာ အကူအညီ မပေးနိုင်သလို တတိယ နိုင်ငံသို့ ထွက်ခွါ သွားနိုင်မည့် အလားအလာလည်း မရှိသည့် အတွက် ပြန်မပို့လျှင်လည်း UNHCR ၊ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းများ အနေဖြင့် စောင့်ရှောက် ကူညီမှုများ၊ အာရုံ စိုက်မှုများ လိုအပ်သလို၊ ပြန်ပို့မည် ဆိုလျှင်လည်း လုံခြုံရေး အာမခံရန် လိုအပ်ကြောင်းနှင့် သူတို့ အနေဖြင့် မြန်မာပြည်တွင် ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် ဒီမိုကရေစီ အခွင့်အရေးများ ရရှိမှသာ ပြန်လို ကြကြောင်း ပြောဆို ကြသည်။ ယခုအခါ လုံခြုံရေး အခြေအနေ အရ ခရိုင် အာဏာပိုင်များသည် ပဒေါင် ကျေးရွာ ၃ ရွာကို တရွာထဲ အဖြစ် စုပေါင်း နေထိုင်စေရန် ပြင်ဆင်မှုများ ပြုလုပ် နေကြောင်း သိရသည်။
0 comments at 10:38 AM Labels: General
0 comments at 5:40 AM Labels: Home Affairs
၁- ကန္တာရ၀တီတိုင်း(မ်) က သတင်းဗျာ၊ ကျေးလက်က ရွာသားတစ်ယောက် ဖမ်းခံရ နှိပ်စက်ခံရတာတွေက ရိုးနေပြီပဲ၊ ဘာများ သတင်းလုပ်စရာရှိသလဲလို့ပြောလည်း ပြောနိုင်ပါတယ်။ နို့ပေမယ့် ဒီလိုဖြစ်ရပ်မျိုး ရှိသလား လို့ မြို့ကြီးသား မြို့ကြီးသူများ အတွေးပွားနိုင်စေဖို့ ကော်ပီကူးပေးလိုက်ပါတယ်။
၂- တိုင်းရင်းသား လူမျိုးစုတွေရဲ့ မြန်မာစာအရေးအသားကလည်း ချီးကျူးစရာဗျာ။ ပြည်ပက သူ့နောင်တော် သတင်းဝက်ဆိုက်တွေထက်သာတာ တွေ့ရမယ်နော်။ အင်း - - - မနာလိုစရာတောင် ဖြစ်နေပြီ။)
ကေအဲန်ပီပီအား ကူညီသည်ဟု သံသယရှိသူ ရွာသား နှိပ်စက်ခံရ
ဇူလိုင်လ ၂၇ ရက်၊ ၂၀၀၇ ခုနှစ်။
ကရင်နီ လူမျိုးပေါင်းစုံ ပြည်သူ့လွတ်မြောက်ရေး တပ်ဦး(ကလလတ) နှင့် ကရင်နီ အမျိုးသား တိုးတက်ရေးပါတီ (ကေအဲန်ပီပီ)တပ်တို့ အကြား တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားစဉ် ကရင်နီ တပ်မတော်အား လမ်းပြအဖြစ် ကူညီဆောင်ရွယ်ပေးခဲ့သည်ဟု သံသယရှိထားသော ရွာသားတဦးအား မြန်မာစစ်တပ်များက ဖမ်းဆီး နှိပ်စက်ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
ကရင်နီပြည်၊ ဖရူဆိုမြို့နယ် ထျေးဘျားညေးရွာမှ အသက်-၄၇နှစ်ရှိ ညေးရယ်အား ယခုလ-၁၇ ရက်နေ့တွင် ခလရ-၄၂၇ မှ ၎င်းတို့၏ တပ်ထဲသို့ ဖမ်းဆီး ခေါ်ဆောင်သွား၍ ညှဉ်းပန်း နိပ်စက်ခြင်း ဖြစ်သည်။ “အဲဒီရွာသားကို KNPP နဲ့ အဆက်အသွယ် ရှိတယ်၊ KNPP ရဲ့ အမာခံ ဖြစ်တယ် ဆိုတဲ့ စွပ်စွဲချက်နဲ့ ကလလတ တွေက လာခေါ်သွားတာ။ ခေါ်သွားတော့ သူတို့က အဲဒီရွာသားကို စစ်ဆေးမေးမြန်းတယ် ပြီး ရိုက်ပုတ်တယ်” ဟု ကရင်နီလူမှု ကယ်ဆယ်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးဌာနမှ တာဝန်ရှိသူ တဦးက ပြောပြသည်။ ပြီးခဲ့သည့်လက ကရင်နီတပ်မတော်နှင့် ကလလတတပ်ဖွဲ့ အကြား တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ရာ ကလလတ ဘက်မှ ထိခိုက်မှုများ ရှိခဲ့သည့် အတွက်ကြောင့် အဆိုပါရွာသား ညေးရယ်မှာ ကရင်နီတပ်မတော်အား လမ်းပြ ကူညီနိုင်ဖွယ်ရှိသည်ဟု ယူဆကာ စစ်တပ်တို့ ယခုလို နှိပ်စက်ခြင်းဖြစ်သည် ဟု ကေအဲန်ပီပီက ဆိုသည်။
ဤကိစ္စနှင့် ပတ်သက်၍ ကေအဲန်ပီပီမှ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ခူဦးရယ်က မြန်မာစစ်တပ်များသည် အကြောင်းအရင်း တခုခု ဖြစ်ပွားသည် ရှိခဲ့သော် ရွာသူရွာသားများကို စစ်ဆေးမေးမြန်းလေ့ ရှိကြောင်း၊ အမှန်တကယ် အပြစ်ရှိ ၊မရှိကို အသေအချာ စုံစမ်း စစ်ဆေးမှု မလုပ်ဘဲ ၎င်းတို့၏ စွပ်စွဲချက်အတိုင်း ရွာသားများကို ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခြင်း၊ ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင် သွားခြင်းများ ပြုလုပ်လေ့ရှိကြောင်း ပြောသည်။
ထျေးဘျားညေးရွာမှ ရွာသူရွာသားတို့၏ ပြောပြချက်အရ ညေးရယ်တွင် အပြစ်မရှိကြောင်း၊ ကေအဲန်ပီပီနှင့်လည်း အဆက်သွယ် မရှိကြောင်းဟု ဆိုသည်။ ညေးရယ်အား ဖမ်းဆီးနှိပ်စက်ပြီး ပြန်လွတ်လာခြင်း မရှိသေးဘဲ ဆက်လက် ထိန်းချုပ်ထားသည်ဟု သိရသည်။
1 comments at 11:44 PM Labels: Home Affairs
0 comments at 1:25 PM Labels: Home Affairs
(ဘလော့ဂါမှတ်ချက် - ရိုးမ ၃ ၀က်ဆိုက်က ဆောင်းပါးဗျာ။ ပုံကိုတော့ လျှပ်တပြက်ဂျာနယ်(၂၀၀၇ ဇွန် ၈ ရက်နေ့ထုတ်)က ယူတယ်။)
နိုင်ငံရေးသမား ရဲဘော်တင်ရွှေ မှသည် ...
နိုင်ငံရေးသမားတယောက်ဟာ သူယုံကြည်တဲ့အရာကို ယုံကြည်ကြောင်း ပြောပိုင်ခွင့် ရှိသလို မယုံကြည်ရင်လည်း မယုံကြည်ကြောင်း ပြောပိုင်ခွင့်ရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သူပြောတဲ့ စကား၊ သူလုပ်တဲ့အလုပ်ရဲ့ အကောင်းအဆိုးကိုတော့ ခံယူရမှာဖြစ်ပါတယ်။
နအဖစစ်အစိုးရက စီစဉ်ထုတ်ဝေပြီး အတိုက်အခံတွေကို စိတ်တိုင်းကျ ရင့်ရင့်သီးသီး ဝေဖန်ရေးသား အပုတ်ချခွင့်ရနေတဲ့ မြန်မာ့အလင်းသတင်းစာမှာ ‘ရဲဘော်တင်ရွှေ’ ဆိုတဲ့ ဆောင်းပါးရှင်က “ကျွန်တော်နိုင်ငံရေးသမား”ဆိုတဲ့ ဆောင်းပါးတစ်စောင် ရေးသားထားပါတယ်။
ဆောင်းပါးကို ဖတ်လိုက်တဲ့အခါ ‘ရဲဘော်တင်ရွှေ’က သူဟာ သာကူးသမားမဟုတ်ရပါ ဘူးဆိုတာကို အချက်အလက်အမျိုးမျိုးနဲ့ ဆင်ခြေတက်ရင်း ရှင်းနေရတာကိုကြည့်ကာ ဆောင်းပါး ရှင်ကို သနားလာရတယ်။ ဆောင်းပါးရှင် ‘ရဲဘော်တင်ရွှေ’က သူဟာ ဆယ့်ခြောက်နှစ်သား ကတည်းက ကိုလိုနီလက်အောက် လွတ်မြောက်ရေးအတွက် တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့သူ၊ ဖက်ဆစ်တော်လှန် ရေးသမား၊ ဖဆပလခေတ်မှာလည်း ပုဒ်မ(၅)နဲ့ ထောင်ထဲဝင်ခဲ့သူ၊ ခေတ်အဆက်ဆက် နိုင်ငံရေး လုပ်လာသူလို့ ဆိုထားတာကြောင့် ဘ၀နေ၀င်ချိန်နီးပြီဖြစ်တဲ့ အဘိုးအရွယ် နိုင်ငံရေးသမားကြီး တယောက်ရဲ့ ကျဆုံးခန်းဟာ ကြေကွဲစရာပါ။
ဆောင်းပါးထဲမှာ ‘ရဲဘော်တင်ရွှေ’က “NLD ခေါင်းဆောင် ဒေါ်စုကြည်က နိုင်ငံ တော်အတွက် သူရေးဆွဲတဲ့ ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံဥပဒေကိုသာ သုံးရမယ်။ ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံ ဆိုတာလဲ သူဦးစီးမှဖြစ်မယ်။ တပ်မတော်ကလုပ်တာ မလိုချင်ဘူးတဲ့လေ။ အဲဒါ ကိုယ်ကျိုးနဲ့ ပြည်သူ့အကျိုးယှဉ်လာရင် ပြည်သူ့အကျိုးကို ဦးစားပေးရမယ်ဆိုတဲ့ နိုင်ငံရေးသမားပီသသူရဲ့ ကျင့်စဉ်ကို လုံးဝဖေါက်ဖျက်လိုက်တာပဲ” လို့ စွပ်စွဲရေးသား ထားတာ တွေ့ရတယ်။
ဒီစာပိုဒ်ထဲက ရေးသားစွပ်စွဲချက်တွေဟာ အမှန်တရားနဲ့ အလွန်ဝေးကွာလှပြီး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို အပုတ်ချချင်၊ နအဖစစ်အစိုးရကို မျက်နှာလုပ်ချင်တဲ့ စိတ်တွေ လွန်ကဲ ပြီး ရေးသားထားတာဆိုတာ သိသာလွန်းပါတယ်။ ဘယ်အချိန်၊ ဘယ်နေရာ၊ ဘယ်အင်တာဗျူး မှာ၊ ဘယ်ဆုံးဖြတ်ချက်မှာ ကျမရေးထားတဲ့ ဖွဲ့စည်းပုံကိုသာ သုံးရမယ်လို့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် က ပြောခဲ့သလားဆိုတာ အတိအကျ ထောက်ပြစေချင်တယ်။ အခုလို ငါ့စကားနွားရ ပြောတာဟာ စစ်တပ်ဝါဒဖြန့်ချိရေးသမား ဆောင်းပါးရှင်တွေနဲ့ ထပ်တူဖြစ်နေပါတော့တယ်။
နအဖကျင်းပနေတဲ့ အတုအယောင် အမျိုးသားညီလာခံကနေ NLD ထွက်သွားတာ တခု တည်းနဲ့ ဒီလိုစွပ်စွဲရင်တော့ အကျင့်သိက္ခာမရှိတဲ့ စစ်အစိုးရလို ငါ့စကားနွားရ ပြောတာပဲဖြစ်မှာပါ။ နိုင်ငံရေးသမားဆိုတာ အကျင့်သိက္ခာရှိရပါ့မယ်။ သူတပါးကို မဟုတ်မမှန် ကိစ္စရပ်တွေနဲ့ ပုံဖေါ် စွပ်စွဲ မတိုက်ခိုက်ရဘူးဆိုတာ ‘ရဲဘော်တင်ရွှေ’ သိပြီးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။
နအဖရဲ့ ညီလာခံကနေ NLD ထွက်သွားခဲ့ရတာဟာ ဆွေးနွေးမှုတွေကို ဘောင်ခတ်ထား တဲ့အပြင် ဒီမိုကရေစီနည်းလမ်းမကျတာကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်။ နအဖညီလာခံအတွင်းမှာ ကိုယ်စား လှယ်တွေအကြား၊ အစုအဖွဲ့ တခုနဲ့တခုအကြား လွတ်လွတ်လပ်လပ် ဆွေးနွေးခွင့်မရှိပါဘူး။ ညှိနှိုင်းခွင့်မရှိပါဘူး။ ညီလာခံအတွင်း စာရွက်စာတမ်းဝေငှတဲ့အတွက် NLD ကိုယ်စားလှယ်တဦး ဖြစ်ခဲ့တဲ့ ဒေါက်တာ အောင်ခင်ဆင့် ထောင်ကျတာကိုကြည့်ရင် အခုကျင်းပနေတဲ့ ညီလာခံရဲ့ လွတ်လပ်ခွင့်ကို သိနိုင်ပါတယ်။
၂၀၀၄ ခုနှစ်မှာ ပြန်လည်စတင်တဲ့ နအဖရဲ့ညီလာခံကို တက်ရောက်ဖို့ NLD က ပြင်ဆင် ခဲ့ပါသေးတယ်။ ဒီလို တက်နိုင်ဖို့အတွက် အချက် (၅)ချက် ဖြည့်ဆီးပေးဖို့ နအဖစစ်အစိုးရကို တောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။
ဒီတောင်းဆိုချက်ထဲမှာ ‘ရဲဘော်တင်ရွှေ’ပြောတဲ့ ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံမှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ဦးစီးရမယ်ဆိုတဲ့အချက် မတွေ့ရပါဘူး။
တောင်းဆိုချက်တွေထဲမှာ ဒီပဲယင်းအရေးအခင်းအပြီး အသက်အန္တရာယ်ကို လုပ်ကြံ မယ့်သူတွေရဲ့ရန်ကနေ ကာကွယ်ပေးထားတာပါလို့ နအဖကဆိုတဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ ဦးတင်ဦးကို ပြန်လွှတ်ပေးဖို့၊ ချိတ်ပိတ်ခံထားရတဲ့ NLD ရုံးခန်းတွေကို ပြန်ဖွင့်ခွင့်ပေးဖို့၊ NLD ကိုယ်စားလှယ်တွေကို ရွေးချယ်ခွင့်ပေးဖို့တွေပဲ ပါဝင်တာ တွေ့ရပါတယ်။ ကျန်တဲ့ အချက် (၂)ချက်ကလည်း ညီလာခံမှာ ဒီမိုကရေစီနည်းလမ်းတကျ ဆွေးနွေးခွင့်ပေးဖို့ တောင်းဆိုထားတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ဖွဲ့စည်းပုံရေးဆွဲမယ့် ညီလာခံကို တက်ရောက်ပါ့မယ်လို့ ဆိုနေမှတော့ ‘ရဲဘော်တင်ရွှေ’ ပြောတဲ့ “NLD ခေါင်းဆောင် ဒေါ်စုကြည်က နိုင်ငံတော်အတွက် သူရေးဆွဲတဲ့ ဖွဲ့စည်း အုပ်ချုပ်ပုံဥပဒေကိုသာ သုံးရမယ်။ ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံဆိုတာလဲ သူဦးစီးမှဖြစ်မယ်။” ဆိုတာဟာ နအဖစစ်အစိုးရလုပ်နေသလို လုပ်ကြံစွပ်စွဲချက်သာ ဖြစ်တယ်ဆိုတာ သိသာနေပါ တယ်။ တကယ်က စစ်အစိုးရကသာ ဖွဲ့စည်းပုံအတွင်း တပ်မတော်ရဲ့ ဦးဆောင်မှုအခန်း ပါဝင်ရမယ်ဆိုတဲ့အချက်ကို အတင်းအဓမ္မ တောင်းဆိုနေတာပါ။ အဖြစ်မှန်ကို မျက်ကွယ်ပြုပြီး ပြောတာဟာ ‘ရဲဘော်တင်ရွှေ’ ရဲ့ အဆင့်အတန်းကို ဖေါ်ပြလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။
‘ရဲဘော်တင်ရွှေ’က ကိုယ့်အရေးထက် ပြည်သူ့အရေးကို ဦးစားပေးပြီး နအဖစစ်အစိုးရ ကို အခုလို ထောက်ခံတာဟာ ဒုတိယအကြိမ်ဖြစ်တယ်လို့ သူ့ဆောင်းပါးမှာ ကိုယ်ရည်သွေးထား ပါတယ်။ ပထမအကြိမ်က ၁၉၆၂ ခုနှစ်က တော်လှန်ရေးကောင်စီကို ထောက်ခံတာလို့ ဂုဏ်ယူ ထားခဲ့ပါသေးတယ်။
ဗိုလ်နေ၀င်းဦးဆောင်တဲ့ စစ်တပ်က ပြည်သူလူထုရွေးကောက်ထားတဲ့ ပထစအစိုးရကို ဖြုတ်ချပြီး ၁၉၆၂ ခုနှစ်မှာ တော်လှန်ရေးကောင်စီနာမည်နဲ့ တိုင်းပြည်အာဏာကို သိမ်းယူလိုက် ပါတယ်။ ဒီအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီက အဲဒီအချိန်က ကမ္ဘာမှာ ခေတ်စားနေတဲ့ ဆိုရှယ်လစ်စနစ် ကို တည်ဆောက်မယ်လို့ ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။
အဲဒီအချိန်မှာ နိုင်ငံရေးသမား အတော်များများ မျက်စေ့လည်ကုန်ပြီး စစ်အာဏာသိမ်းမှု ကို ထောက်ခံခဲ့ကြပါတယ်။ သူတို့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ ၀ိဓူရ သခင်ချစ်မောင်က ‘ရဲဘော်တင်ရွှေ’ တို့ကို “အခု တပ်မတော်က ဆိုရှယ်လစ်နိုင်ငံထူထောင်ဖို့ ကြေညာလိုက်ပြီ။ အရေးကြီးတာက ဘယ်သူလုပ်လုပ် ဒို့လိုချင်တဲ့ ဆိုရှယ်လစ်နိုင်ငံဖြစ်ဖို့က အဓိကပဲ။ ဒို့တတွေ ၀ိုင်းဝန်းကြိုဆို ထောက်ခံပြီး ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ကြရမယ်”လို့ ရှင်းပြခဲ့ကြောင်း ဆောင်းပါးမှာ ဖေါ်ပြထား ပါတယ်။
ဒီနေရာမှာ ‘ရဲဘော်တင်ရွှေ’တို့ရဲ့ ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ ၀ိဓူရ သခင်ချစ်မောင်နဲ့ ပတ်သက် ပြီး သတိသံဝေဂရစရာ အကြောင်းလေး ပြောချင်ပါတယ်။ ဗိုလ်နေ၀င်းဟာ အိမ်စောင့်အစိုးရ အမည်နဲ့ အာဏာသိမ်းဖို့လုပ်ဆောင်တဲ့ ၁၉၅၈ ခုနှစ်မှာ သခင်ချစ်မောင်ဟာ အပြင်းအထန် ကန့်ကွက်ခဲ့တယ်။ ပါလီမန်လွှတ်တော်အတွင်း စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကို ကန့်ကွက်ကြောင်း ပြောကြားတဲ့ မိန့်ခွန်းကို အစွဲပြုပြီး ပြည်သူတွေက ၀ိဓူရ သခင်ချစ်မောင်လို့ ဂုဏ်ပြုခေါ်ဝေါ်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကာယကံရှင်ကိုယ်တိုင် လေးစားတန်ဖိုးထားပြီး သူ့နာမည်ရှေ့မှာ ၀ိဓူရလို့ ထည့်သွင်းခဲ့ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် ၁၉၆၂ ခု စစ်အာဏာသိမ်းချိန်မှာတော့ ၀ိဓူရ သခင်ချစ်မောင်ဟာ စစ်အာဏာ သိမ်းမှုကို ထောက်ခံခဲ့ပြီး ‘ခွေးကတက်မှာပဲ နေရနေရ’လို့ ပြောခဲ့တဲ့အခါ ပြည်သူတွေက သခင် ချစ်မောင်ကို ဘာဘွဲ့ပေးလိုက်တယ်ဆိုတာ ‘ရဲဘော်တင်ရွှေ’ သိပြီးဖြစ်ပါတယ်။
ဒီအကြောင်းပြန်ဖေါ်ရေးရတာက ခေတ်အဆက်ဆက် ပြည်သူတွေဟာ စစ်အာဏာရှင် စနစ်ကို ထောက်ခံတဲ့ နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေအပေါ် ထားတဲ့အမြင်နဲ့ ထားတဲ့တန်ဖိုးကို သိစေ ချင်တဲ့ စေတနာနဲ့ပါ။
‘ရဲဘော်တင်ရွှေ’တို့ အားရ၀မ်းသာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက် ထောက်ခံခဲ့တဲ့ ဗိုလ်နေဝင်းရဲ့ (၂၆)နှစ်ကြာ ‘စစ်တပ်နည်း စစ်တပ်ဟန် ဆိုရှယ်လစ်စနစ်’ တည်ဆောက်မှုရဲ့ အသီးအပွင့်အဖြစ် မြန်မာနိုင်ငံဟာ ကမ္ဘာ့အဆင်းရဲဆုံးနိုင်ငံ ဖြစ်သွားခဲ့ရပါတယ်။ ‘ရဲဘော်တင်ရွှေ’ တို့ ထောက်ခံခဲ့တဲ့ ဗိုလ်နေ၀င်းရဲ့ မဆလစစ်အစိုးရကို ၁၉၈၈ ခုနှစ်မှာ မြန်မာပြည်သူ ထောင် ပေါင်းများစွာက အသက်ပေးပြီး ဖြုတ်ချခဲ့ကြရပြီး ဖြစ်ပါတယ်။
ကမ္ဘာမှာ ဒီမိုကရေစီခေတ်စားနေတဲ့ အချိန်ဖြစ်တဲ့အတွက် အခုလည်း စစ်တပ်က စစ်တပ်နည်း စစ်တပ်ဟန်နဲ့ သူတို့အခေါ် ‘စည်းကမ်းပြည့်ဝတဲ့ ဒီမိုကရေစီစနစ်’ ထူထောင်ဖို့ လုပ်ဆောင်နေပြန်ပါပြီ။ ဒါကိုလည်း ‘ရဲဘော်တင်ရွှေ’က နောက်တခါထပ်ပြီး အားရ၀မ်းသာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက် ထောက်ခံတာလည်း သိပ်ပြီး ထူးထွေတည့် အံ့ရာသော မဟုတ်ပါဘူး။
ဒါပေမယ့် ဆောင်းပါးတစောင်လုံးကို ဖတ်ပြီးချိန်မှာတော့ ‘ရဲဘော်တင်ရွှေ’ဟာ သူ့ဆောင်းပါးခေါင်းစဉ်လို ‘ကျွန်တော်နိုင်ငံရေးသမား’ မဟုတ်တော့ဘဲ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ NLD ကို မဟုတ်မမှန် လုပ်ကြံတိုက်ခိုက်ရင်း စစ်တပ်က မျက်နှာသာပေးမယ်လို့ မျှော်မှန်းပြီး စစ်တပ်ကို မျက်နှာလိုမျက်နှာရ လုပ်နေတဲ့ ‘စစ်တပ်ရဲ့ ကျွန်…တော်’ တယောက် ဖြစ်နေတယ် ဆိုတာကို တွေ့ရှိလိုက်ရပါတော့တယ်။
‘ရဲဘော်တင်ရွှေ’တယောက် စစ်တပ်ရဲ့ ကျွန်...တော်ဘ၀ကနေ ကျွန်တော်နိုင်ငံရေး သမားစစ်စစ် ပြန်ဖြစ်ပါစေ။
0 comments at 6:29 AM Labels: Humour
0 comments at 6:26 AM Labels: Home Affairs
အမျိုးသားညီလာခံ စရိတ် ကုန်သည်များ မဖြစ်မနေလှူရ
ကြည်ဝေ ဇူလိုင် ၂၇၊ ၂၀၀၇
ကျင်းပနေဆဲ အမျိုးသားညီလာခံ ကုန်ကျစရိတ်များအတွက် စစ်အစိုးရက ကုန်သည်စီးပွားရေး လုပ်ငန်းရှင်များကို ဖိအားပေး လှူဒါန်းခိုင်းကြောင်း သိရသည်။
အမျိုးသားညီလာခံအတွက် မဖြစ်မနေလှူဒါန်းရမည် ဟူသည့် အမိန့်စာထုတ်သောကြောင့် လှူဒါန်းကြရသည်ဟု ရန်ကုန်မြို့က ဆန်စပါး ကုန်သည်ကြီးများအသင်း အဖွဲ့ဝင် တဦးကပြောသည်။
“လုပ်ငန်းတော်တော်များများ အဆင်မပြေကြဘူး၊ အခွန် ပြဿနာကိုလည်း အားလုံးရင်ဆိုင်နေကြရတယ်၊ အခုလို မဖြစ်မနေပေးလှူရတဲ့ ကိစ္စတွေကလည်း ရှိသေးတယ်”ဟု ၎င်းက ဧရာဝတီသို့ ပြောဆိုသည်။
လုပ်ငန်းရှင်တဦးလျှင် လုပ်ငန်း ပမာဏအပေါ် မူတည်၍ ကျပ် ၁ သိန်းမှ ကျပ် ၁၀ သိန်း (ငွေ သို့မဟုတ် ကုန်ပစ္စည်း) အထိ လှူခိုင်းကြောင်း လှိုင်သာယာ စက်မှုဇုန် လုပ်ငန်းရှင် များကလည်း ပြောသည်။
ထိုသို့ ဖိအားပေးလှူဒါန်းခိုင်းသောကြောင့် လုပ်ငန်းရှင်များက ၎င်းတို့ လှူဒါန်းငွေ ကာမိစေရန်အတွက် ကုန်ပစ္စည်းများ အပေါ်တွင် ဈေးနှုန်းတိုးယူကြသည်ဟု ကုန်သည် တဦးကပြောပြသည်။
အမျိုးသားညီလာခံအတွက် ငွေကျပ် ၅၃ ၂၆၅ ၅၀၀ တန်ဖိုးရှိ ငွေကြေး နှင့် ဆန်၊ စားသုံးဆီ၊ ကြက်သွန်၊ စာရေး ကိရိယာ စသည့် လူသုံးကုန်ပစ္စည်းများကို ကုန်သည် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင် ၁၀၀ ကျော်က လှူဒါန်းကြကြောင်း ကြာသပတေး နေ့ထုတ် မြန်မာ့အလင်း သတင်းစာတွင် ဖော်ပြထားသည်။ပြီးခဲ့သည့် ၂၀၀၅ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာ ၅ ရက်တွင် စတင်ပြုလုပ်သော ၂ လကြာ အမျိုးသားညီလာခံ တကြိမ်ကျင်းပသည့် ကုန်ကျစရိတ်မှာ ငွေကျပ် သန်း ၃၀၀ ခန့် ကုန်ကျကြောင်း သိရသည်။
0 comments at 6:17 AM Labels: Home Affairs
0 comments at 10:31 PM Labels: Home Affairs
0 comments at 1:37 PM Labels: Home Affairs
0 comments at 6:10 AM Labels: Home Affairs
ဂျာနယ်၊ မဂ္ဂဇင်းများတွင် နိုင်ငံခြားကြော်ငြာများ ဖော်ပြခွင့်မရ
ကိုသက် ဇူလိုင် ၂၆၊ ၂၀၀၇
မြန်မာနိုင်ငံမှ တရားဝင်ထုတ်ဝေသည့် ဂျာနယ်နှင့် မဂ္ဂဇင်းများ၏ ကြော်ငြာကဏ္ဍများ၌ နိုင်ငံခြားကြော်ငြာများကို မဖော်ပြ ရန်နှင့် ပြည်တွင်းကြော်ငြာများတွင်လည်း ပြဿနာတစုံတရာဖြစ်လာပါက သက်ဆိုင်ရာ ဂျာနယ်၊ မဂ္ဂဇင်းက တာဝန်ယူ ဖြေရှင်းရမည်ဟု စာပေစိစစ်ရေးကပြောဆိုကြောင်း ရန်ကုန်အခြေစိုက် အယ်ဒီတာတဦးက ပြောသည်။
“တရားဝင်တော့စာမထွက်သေးဘူး။ ဂျာနယ်တိုက်တွေကို နှုတ်နဲ့တော့ လှမ်းပြောတယ်။ လောလောဆယ် စိစစ်ရေးတင်ထားတဲ့ဂျာနယ်တွေ ပြန်ကျလာရင်တော့ ဘယ်ကြော်ငြာတွေဖြုတ်လိုက်တယ်ဆိုတာ သိရမယ်” ဟု အဆိုပါအယ်ဒီတာကပြောသည်။
ယခုအပတ်ထုတ် မြန်မာတိုင်းမ်ဂျာနယ် (အင်္ဂလိပ်) တွင် နအဖ ဥက္ကဌ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေအား စကားဝှက်ဖြင့် လူသတ်သမားဟု ရေးသား ထားသည့်ကြော်ငြာကြောင့် နိုင်ငံခြားကြော်ငြာများ ဖော်ပြခွင့်ကို တားဆီးလိုက်ခြင်း ဖြစ်သည်။
ရန်ကုန်အခြေစိုက် သတင်းထောက်တဦးက “အခြေအနေတွေက ပိုပြီးတင်းကျပ်လာမယ့် သဘောရှိတယ်။ နိုင်ငံခြားက ကျောင်း ကြော်ငြာတောင် ထည့်လို့မရတော့ဘူး” ဟု ပြောသည်။
မြန်မာတိုင်းမ်ကြော်ငြာနှင့်ပတ်သက်၍ ယမန်နေ့က စာပေစိစစ်ရေးမှ ညွှန်ကြားရေးမှူး ဗိုလ်မှူးတင့်ဆွေနှင့် စစ်ဆေးရေးမှူး ၃ ဦးကို စစ်ဖက် ရေးရာလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့က ခေါ်ယူမေးမြန်းခဲ့ပြီး ထုချေလွှာတင်ရန်လည်း ညွှန်ကြားထားသည်ဟု အဆိုပါသတင်းထောက်က ပြောသည်။
“ဒီကိစ္စမှာ ၂ ပိုင်းရှိတယ်။ တခုက ကျနော်တို့ရပ်တည်ရေးကို ထိခိုက်တယ်။ ဘာလုပ်လုပ် ၀က်အူရစ်သလို အရစ်ခံရမယ်။ တဘက်ကလည်း ကြော်ငြာရဲ့ စိတ်ကူးစိတ်သန်းကို သဘောကျတယ်။ လူတွေကလည်း မိတ္တူကူးပြီး အရပ်ထဲမှာ အချင်းချင်းဖြန့်နေကြတယ်” ဟု ရန်ကုန်ရှိ အယ်ဒီတာက ပြောသည်။
အဆိုပါကြော်ငြာကို ဒိန်းမတ်အခြေစိုက် Surrend အဖွဲ့က ထည့်သွင်း ကြော်ငြာခြင်းဖြစ်ပြီး ဖိနှိပ်တင်းကျပ်သော စစ်အစိုးရ လက်အောက်တွင် ယခုကဲ့သို့ လျှို့ဝှက်စွာလုပ်ဆောင်နိုင်သည်ဟူသော အတွေ့အကြုံကို ယူခြင်းဖြစ်သည်။အာဏာပိုင်တို့က ၎င်းကြော်ငြာကိုဖော်ပြသည့် မြန်မာတိုင်းမ်ဂျာနယ်အပေါ် မည်သို့အရေးယူဆောင်ရွက်မည်ကို ရန်ကုန်ရှိ စာနယ်ဇင်းသမားများအကြား ပြောဆိုဝေဖန်နေကြကြောင်း စုံစမ်းသိရှိရသည်။
0 comments at 10:25 PM Labels: Home Affairs
ဒီဗွီဘီ သတင်းဗျာ။ ကလစ်ပေးပြီး ဖတ်ရုံသာ။
0 comments at 6:22 AM Labels: Home Affairs
0 comments at 6:09 AM Labels: General news
(မှတ်ချက် - ဧရာဝတီ ၀က်ဆိုက်က သတင်းဗျာ။
သူတို့ဝက်ဆိုက်မှာတော့ ပုဂံလေကြောင်း လေယာဉ်နောက်ခံနဲ့ ဦးတေဇပုံ တင်ထားတယ်။ ပုံက နည်းနည်းလေးတာကြောင့် ကျနော့်မှာရှိတဲ့ ခပ်ပေါ့ပေါ့ပုံနဲ့ အစားထိုးလိုက်ပါတယ်။ myanmar times ကပုံဟောင်း။)
ပင်လယ်ကူးသင်္ဘောလိုင်း ဦးတေဇ ထူထောင်မည်
ကိုသက် ဇူလိုင် ၂၅၊ ၂၀၀၇
မြန်မာနိုင်ငံတွင် ပထမဆုံးပုဂ္ဂလိကပိုင် ပင်လယ်ကူးသင်္ဘောလိုင်းကို ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေနှင့်နီးစပ်သူ ဦးတေဇ၏ ထူး ကုမ္ပဏီက စတင်ထူထောင်မည်ဟု ရန်ကုန်မြို့ရှိ စီးပွားရေးအသိုင်းအ၀န်းတွင် ပြောဆိုနေကြသည်။
တန်ချိန်လေးထောင်ရှိ ကုန်တင်သင်္ဘောနှင့် ဆီတင် သင်္ဘော စုစုပေါင်းအဟောင်းနှစ်စီးကို စင်ကာပူနိုင်ငံမှ ၀ယ်ယူရန် ဦးတေဇအား ကျပ်ငွေသန်းပေါင်း တသိန်းကို စစ်အစိုးရက ထုတ်ချေးထားသည်ဟုလည်း ရန်ကုန်ရှိ စီးပွားရေးသမားတဦးက ပြောဆိုသည်။
လွန်ခဲ့သည့်လကုန်ပိုင်းက ပို့ဆောင်ရေးဝန်ကြီးဌာန၀န်ကြီး ဗိုလ်ချုပ်သိန်းဆွေနှင့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များ နေပြည် တော်တွင်ပြုလုပ်ခဲ့သည့် အစည်းအဝေး၌ ဗိုလ်ချုပ် သိန်းဆွေက “ပုဂ္ဂလိကပိုင် သင်္ဘောလိုင်းတွေ ပေါ်ပေါက် လာမှာကို ကျနော်တို့ အထူးပဲကြိုဆိုပါတယ်”ဟု ပြောဆိုသည်။
ထူး ကုမ္ပဏီက ပြေးဆွဲမည့် ပင်လယ်ကူးသင်္ဘောများတွင် ခရီးသည်တင် ဇိမ်ခံသင်္ဘောများလည်း ပါဝင်မည်ဖြစ်ပြီး ၎င်းဇိမ်ခံသင်္ဘောများကို စတင်ပြေးဆွဲမည်ဟု ထူး ကုမ္ပဏီနှင့် နီးစပ်သူတဦးက ပြောသည်။
ဦးတေဇအား ရန်ကုန်စီးပွားရေးအသိုင်းအ၀ိုင်းက လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံ၏ အကြွယ်ဝဆုံးစီးပွားရေးသမားဟု သုံးသပ်ကြပြီး စစ်အစိုးရက ရုရှားနိုင်ငံလုပ် တိုက်လေယာဉ်များဝယ်ယူရာတွင် ပွဲစားလုပ်ပေးခဲ့ရာမှ ၎င်းအား လူသိများလာခဲ့သည်။
ထူး ကုမ္ပဏီသည် ဆောက်လုပ်ရေး၊ ဟိုတယ်နှင့် ခရီးသွားလာရေး၊ သစ်နှင့် ပို့ကုန်သွင်းကုန်လုပ်ငန်းများကို လုပ်ကိုင် နေသည့်အပြင် လမ်းတံတားဆောက်လုပ်ရေးသုံး အကြီးစားစက်ပစ္စည်းများကိုလည်း ငှားရမ်းသည်။ ဦးတေဇသည် ၂၀၀၄ ခုနှစ်တွင် အဲပုဂံလေကြောင်းလိုင်းကို တည်ထောင်၍ ပြည်တွင်းခရီးစဉ်များ စတင်ပြေးဆွဲခဲ့ပြီး ယခုနှစ် မေလမှစ၍ နိုင်ငံခြားခရီးစဉ်များကို တိုးချဲ့ပြေးဆွဲခဲ့သည်။
ထူး ကုမ္ပဏီက ပုဂ္ဂလိကပိုင် ပင်လယ်ကူးသင်္ဘောလိုင်း တည်ထောင်ရခြင်းမှာ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေ၏ ဆန္ဒကို အကောင် အထည် ဖော်ပေးရခြင်းဖြစ်သည်ဟုလည်း ရန်ကုန်ရှိ စီးပွားရေးသမားက ဆိုသည်။မြန်မာနိုင်ငံတွင် ပင်လယ်ကူးသင်္ဘောလိုင်းအနေဖြင့် နိုင်ငံတော်ပိုင်ဖြစ်သည့် မြန်မာ့ကြယ်ငါးပွင့် သင်္ဘောလုပ်ငန်းတခုသာ ရှိခဲ့ပြီး နိုင်ငံခြားနှင့် ကမ်းရိုးတန်းတလျှောက် ပြေးဆွဲသည့်သင်္ဘော ဆယ်စီးကျော်ရှိသည်။
a young student arrested & forced to protect the country
0 comments at 5:53 AM Labels: Home Affairs
စီမံချက်ကြောင့် အဓမ္မစစ်မှုထမ်းရန် ကျောင်းသားတဦးအဖမ်းခံရ
ရိုးမ ၃။ ဇူလိုင် ၂၅၊ ၂၀၀၇
စစ်သားစုဆောင်းရေးစီမံချက်ကြောင့် ကျောင်းနေအရွယ်ကလေးငယ်တဦး အဓမ္မစစ်မှုထမ်းရန် ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရသည်။
ပဲခူးတိုင်းအတွင်း ယခုလတွင် စစ်သားစုဆောင်းရေးအတွက် စီမံချက်ချမှတ်ကာ လုပ်ဆောင်နေ ခြင်းကြောင့် ဇီးကုန်းမြို့မှ ကျောင်းသားတဦး စစ်မှုထမ်းခိုင်းစေရန် အဓမ္မ ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်ခံခဲ့ ရခြင်းဖြစ်သည်။
ဇီးကုန်းမြို့၊ မြို့မအလယ်တန်းကျောင်းမှ သတ္တမတန်းတွင် ပညာသင်နေသည့် အသက် (၁၅)နှစ် ရှိ မောင်သန့်ဇင်ဦးသည် နေအိမ်မှ ဗွီဒီယိုကြည့်ရန်သွားစဉ် ယခုလ (၉) ရက်နေ့က ပျောက်ဆုံး သွားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
“ထမင်းစားပြီးတော့ အမေဆီက ငွေသုံးဆယ်တောင်းပြီး ဗွီဒီယိုကြည့်ဖို့သွားတာ မိုးချုပ်လည်း ပြန်မရောက်တော့ ညတွင်းချင်းရှာကြသေးတယ်၊ ဘယ်မှာမှမတွေ့ဘူး။ နောက်နေ့ထပ်ရှာမှ မြင်လိုက်တဲ့လူတွေက နင်တို့သား စစ်သားစုဆောင်းရေးက အတင်းခေါ်သွားတာတွေ့တယ်လို့ ပြောကြတယ်”ဟု မိသားစုဝင်တဦးက ဆိုသည်။
စစ်သားစုဆောင်းရေးတပ်တွင် သွားရောက်မေးမြန်းသည့်အခါတွင်လည်း မရှိကြောင်း၊ အဆိုပါ အမည်လည်းမရှိကြောင်း ပြောဆိုခဲ့သဖြင့် ပြန်လာခဲ့ရပြီး ယခုလ (၂၂) ရက်နေ့က အင်းမမြို့ အခြေစိုက် အမှတ် (၄) ခြေမြန်တပ်ရင်းတွင် ရောက်ရှိနေကြောင်း သိရသည်ဟုဆိုသည်။
သတ္တမတန်းတွင် ပညာသင်ကြားနေသည့် မောင်သန့်ဇင်ဦးသည် အဖ ဦးမြင့်ကျော်၊ အမိ ဒေါ်ရွှေလုံး (ခ) ဒေါ်စိုးသိန်းတို့နှင့်အတူ ဇီးကုန်းမြို့၊ ကျွန်းတောလမ်း၊ အမှတ် (၄) ရပ်ကွက်တွင် နေထိုင်သူတဦးဖြစ်သည်။
“စစ်သားတယောက်စုပေးလျှင် ငွေ(၃၀,၀၀၀)နဲ့ ဆန်တအိတ်ပေးတယ်။ ကြို့ပင်ကောက်၊ ဇီးကုန်း၊ နတ္တလင်း၊ ပေါင်းတည်မြို့နယ်တွေဘက်မှာ အခုလအတွင်း စီမံချက်နဲ့ကို စစ်သား စုဆောင်းနေတာ”ဟု ဒေသခံတဦးက ဆိုသည်။
စစ်အစိုးရအနေဖြင့် တနှစ်လျှင် တပ်သားသစ်စုဆောင်းမှုများကို သက်ဆိုင်ရာ တိုင်းအလိုက် ဦးရေသတ်မှတ်ချက်ပြည့်မီအောင် နယ်မြေခံတပ်ရင်းတပ်ဖွဲ့များကို ညွှန်ကြားချက်များ ပေးပို့၍ စစ်သားသစ်များစုဆောင်းစေမှုကြောင့် အရွယ်မရောက်သေးသည့် ကလေးငယ်များစွာ နှစ်စဉ် အဓမ္မ စစ်မှုထမ်းစေခိုင်းခြင်းကို ခံခဲ့ရသည်။
ပြီးခဲ့သည်လ (၂၅) ရက်နေ့မှ (၂၉) ရက်နေ့ထိ ကလေးသူငယ်များနှင့် လက်နက်ကိုင်ပဋ်ိပက္ခ ဆိုင်ရာ ကုလသမဂ္ဂအတွင်းရေးမှူးချုပ်၏ အထူးကိုယ်စားလှယ် မစ္စ ရာဒီကာကုမာရဆွာမိ မြန်မာနိုင်ငံသို့ရောက်ရှိခဲ့ပြီး စစ်အစိုးရတပ်တွင်း ကလေးငယ်များ စစ်မှုထမ်းဆောင်နေခြင်းနှင့် သက်ဆိုင်သည့် ကိစ္စရပ်များကို စစ်အစိုးရအဖွဲ့ဝင် ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီး သိန်းစိန်နှင့် တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးခဲ့သည်။
အဆိုပါ အထူးကိုယ်စားလှယ်က စစ်အစိုးရဖွဲ့စည်းထားသည့် ကလေးသူငယ်များအား စစ်မှုထမ်း ခြင်းမှ ကာကွယ်တားဆီးရေးကော်မတီဝင်များနှင့်လည်း တွေ့ဆုံခဲ့ကာ စစ်အခြေခံ လေ့ကျင့်ရေး ကျောင်းများသို့လည်း သွားရောက်လေ့လာခဲ့သည်ဟု ဆိုသည်။
စစ်အစိုးရအနေဖြင့် ၄င်းတို့လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့များအတွင်း အရွယ်မရောက်သေးသူ ကလေး ငယ်များအား စစ်မှုထမ်းခိုင်းစေခြင်းမရှိကြောင်း ငြင်းဆိုနေသော်လည်း နိုင်ငံအနှံ့ ကလေးငယ် များ စစ်သားအဖြစ် အဓမ္မ စုဆောင်းခံနေရဆဲဖြစ်သည်။ လူ့အခွင့်အရေးအဖွဲ့များကလည်း စစ်အစိုးရတပ်များအတွင်း ကလေးငယ် (၇၀၀၀၀)ခန့် စစ်မှုထမ်းနေကြရသည်ဟုဆိုသည်။
0 comments at 11:08 PM Labels: Home Affairs
၁။ ဧရာဝတီ ၀က်ဆိုက်က သတင်းဗျာ။
၂။ ပုံကို ရိုးမ၃ ၀က်ဆိုက်မှာတွေ့လို့ ယူထည့်ပေးလိုက်တယ်။ ပုံပိုင်ရှင်က နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားကူညီရေးအသင်း။
၃။ ရိုးမ၃ က ဒီအုပ်စုရဲ့သတင်းတွေကို အထူးလေ့လာစုဆောင်းတဲ့ ၀က်ဆိုက်ပဲ။ သို့ပေမယ့် သူ့သတင်းက ရှည်လွန်းလို့ ဧရာဝတီ သတင်းကိုပဲ ရွေးလိုက်တယ်။ အချိန်ဆင်းရဲတဲ့ခေတ် ရောက်ပြီဗျာ။ လိုတိုရှင်းလေ ကောင်းလေ။
၄။ ၀က်ဆိုက် ၂ခုမှာ လူတစ်ယောက်ရဲ့နာမည်ကို ၂ မျိုးပေါင်းထားတယ် မတူဘူး။ ကိုမြင့်နိုင်၊ ကိုမြင့်လှိုင် တဲ့။
၅။ ဘယ်ဟာမှန်သလဲတော့ မသိ။ သေချာတာကတော့ အဲဒီလူနဲ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေက အရိုက်လည်း ခံရ၊ လုပ်ကြံတာလည်း ခံရ။ ခုတော့လည်း ထောင်ချခံရ။)
လူ့အခွင့်အရေးလှုပ်ရှားသူများ နှစ်ရှည်ထောင်ဒဏ် ချမှတ်ခံရ
ကိုစိုး ဇူလိုင် ၂၄၊ ၂၀၀၇
ဟင်္သာတထောင်တွင် ဖမ်းဆီးချုပ်နှောင်ထားခြင်းခံရသည့် လူ့အခွင့်အရေးကာကွယ် မြှင့်တင်သူ (HRDP) အဖွဲ့ဝင် ကိုမြင့်နိုင်နှင့် ၅ ဦး တို့ကို အာဏာပိုင်များက ယနေ့ ပြစ်ဒဏ်များချမှတ်လိုက်ကြောင်း သိရသည်။
ဟင်္သာတမြို့နယ် တရားရုံးက ယနေ့ အမိန့်ချမှတ်ရာတွင် ပုဒ်မ (၅၀၅/ခ) (၅၀၅/ဂ) တို့ဖြင့် အာဏာပိုင်များက တရားစွဲဆို ထားသော ကိုမြင့်နိုင်တို့ ၆ ဦးအား ထောင်ဒဏ် ၄ နှစ်မှ ၈ နှစ် ချမှတ်လိုက်သည်ဟု နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများ ကူညီ စောင့်ရှောက်ရေးအသင်း (AAPP) ကပြောသည်။
ပြစ်ဒဏ်ကျခံရသူများမှာ ကိုမြင့်နိုင်၊ ကိုကျော်လွင်၊ ကိုမြစိန်၊ ကိုလှရှိန်၊ ဦးမြင့်နှင့် ဦးဝင်းတို့ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
အဆိုပါ HRDP အဖွဲ့ဝင်များသည် ဧပြီလ ၁၈ ရက်နေ့က ဟင်္သာတ မြို့နယ်တွင်း လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များကို လှည့်လည်ရှင်းလင်းစဉ် အုတ်ပုံကျေးရွာ၌ ကြံ့ဖွံ့အဖွဲ့များ၏ တိုက်ခိုက်မှုကြောင့် HRDP အဖွဲ့ဝင် ကိုမြင့်နိုင်နှင့် ကိုမောင်မောင်လေးတို့ ၂ ဦး ပြင်းထန်စွာ ဒဏ်ရာရကြ၍ ရန်ကုန်ဆေးရုံကြီး ဦးနှောက်နှင့် အာရုံကြောဌာနတွင် တပတ်ခန့် ဆေးကုသမှု ခံယူကြရသည်။
ယင်းတိုက်ခိုက်မှုကို ဟင်္သာတမြို့နယ် တလုပ်ထော် ကျေးရွာရဲစခန်းတွင် အမှုဖွင့်တိုင်ကြားခဲ့သော်လည်း အတိုက်ခိုက်ခံရ သူများ ဆေးရုံကဆင်းသည်အထိ တာဝန်ရှိသူများက လာရောက် စစ်ချက်ယူခြင်းမရှိသောကြောင့် ကိုမြင့်နိုင်က တရားရုံးသို့ ဦးတိုက် လျှောက်ထားခဲ့သည်။
ထို့နောက် ကိုမြင့်နိုင်အပါအ၀င် HRDP အဖွဲ့ဝင်များဖြစ်သော ဦးဝင်း၊ ကိုမြစိန်၊ ကိုလှရှိန်၊ ဦးမြင့် နှင့် ကိုကျော်လွင်တို့ ၆ ဦးကို အုတ်ပုံရွာ ရယက ဥက္ကဌ ဦးအောင်သန်းက ဥပဒေ ပုဒ်မ (၅၀၅/ခ) (၅၀၅/ဂ) တို့ဖြင့် ပြန်လည်တရားစွဲဆိုခဲ့ပြီး မေလ ၂ ရက် နေ့က ရုံးချိန်းအတွင်း ၎င်းတို့ ၆ ဦးအား အာဏာပိုင်များက ဖမ်းဆီးချုပ်နှောင်၍ ဟင်္သာတထောင်သို့ ပို့ဆောင်ခဲ့သည်။
ယင်း အုပ်ပုံရွာ ရယက ဥက္ကဌ ဦးအောင်သန်းသည် အုပ်ပုံရွာတွင် ၎င်းတို့အား အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်စဉ်က ပါဝင်ခဲ့သူ တဦးဖြစ်သည်ဟု HRDP အဖွဲ့ဝင်များက ပြောသည်။
ပုဒ်မ (၅၀၅/ခ)သည် နိုင်ငံတော် ငြိမ်ဝပ်ပိပြားရေးကို ပျက်ပြားစေရန် လှုံ့ဆော်သည့်ပုဒ်မဖြစ်ပြီး (၅၀၅/ဂ)သည် လူမျိုးစု အချင်းချင်း (သို့မဟုတ်) လူအုပ်စုအချင်းချင်း ပြဿနာဖြစ်စေရန် လှုံ့ဆော်သည့်ပုဒ်မဖြစ်သည်ဟု သိရသည်။
ရန်ကုန်အခြေစိုက် ယင်း HRDP အဖွဲ့အား ၂၀၀၂ ခုနှစ်က စတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီး လူ့အခွင့်အရေး မြှင့်တင်ရေးလုပ်ငန်းများကို တနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာဖြင့် လှုပ်ရှားဆောင်ရွက်နေသည့် အဖွဲ့ဖြစ်သည်။
0 comments at 6:33 AM Labels: Home Affairs
“သန်းရွှေ လူသတ်သမား” ကြော်ငြာ မြန်မာတိုင်းမ်မှာပါ
မြန်မာပြည်တွင်း၌ ထုတ်ဝေနေသော နောက်ဆုံးထုတ် မြန်မာတိုင်းမ်ဂျာနယ် (အင်္ဂလိပ်) တွင် စစ်အစိုးရ ခေါင်းဆောင် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး သန်းရွှေကို လူသတ်သမားဟု စကားဝှက်ထည့်ထားသည့် ကြော်ငြာတခု ပါဝင်ကြောင်း သိရသည်။
အဆိုပါကြော်ငြာကို ဒိန်းမတ်အခြေစိုက် Surrend အဖွဲ့က ထည့်သွင်း ကြော်ငြာခြင်းဖြစ်ပြီး ဖိနှိပ်တင်းကြပ်သော စစ်အစိုးရ လက်အောက်တွင် ယခုကဲ့သို့ လျှို့ဝှက်စွာ လုပ်ဆောင်နိုင်သည်ဟူသော အတွေ့အကြုံကို ယူခြင်းဖြစ်သည်ဟု ယင်းအဖွဲ့ဝင်တဦးဖြစ်သူ ပီယာ ဘာတယ်လ်ဆန် က အေပီသတင်းဌာနသို့ ပြောသည်။
ကြော်ငြာ ဒီဇိုင်းမှာ အုန်းပင် တပင်၊ နေရောင်တောက်နေသည့် နေလုံး တခုပါဝင်ပြီး “ခင်မင်နှစ်လိုဖွယ်ရာ မိတ်ဆွေများနှင့် လှပသောနိုင်ငံ” စာတန်းပါ စကင်ဒီနေးဗီးယား နိုင်ငံများက ဧည့်သည်များကို မြန်မာ နိုင်ငံသို့ အလည်လာရောက်ပါရန် ဖိတ်ခေါ်ထားသည့် ခရီးသွားလုပ်ငန်း ကြော်ငြာပုံစံမျိုး ဖြစ်သည်။
ကြော်ငြာဒီဇိုင်း၏ အောက်ခြေရှိ The Board of Islandic Travel Agencies Ewhsnahtrellik and the Denish Industry BesoegDanmark ဟူသော စာတန်းတွင် Killerthanshwe ဟု ပြောင်းပြန်ရေးထားသော စာလုံးများကို ထည့်သွင်းထားခြင်း ဖြစ်သည်။
စစ်အာဏာရှင်များကို ဝေဖန်တိုက်ခိုက်နိုင်သော နည်းလမ်းတခုကို ထုတ်ဖော်ပြသခြင်းဖြစ်သည်ဟုလည်း ပီယာ ဘာတယ်လ်ဆန်က ပြောသည်။
“ဖိနှိပ်တင်းကြပ်တဲ့ စိစစ်ရေးအောက်မှာ အလွန်ဆိုးဝါးတဲ့ စစ်အစိုးရအကြောင်းကို ထုတ်ဖော်ပြသနိုင်ဖို့ အနုပညာ နည်းလမ်း တွေကို ရှာဖွေအသုံးပြုနိုင်တယ်ဆိုတာကို ပြသခြင်းဖြစ်ပါတယ်”ဟု လည်း ၎င်းက ပြောသည်။
ယင်းကြော်ငြာနှင့်ပတ်သက်၍ မြန်မာတိုင်းမ်ဂျာနယ်သို့ မေးမြန်းစုံစမ်းရာတွင် ချက်ခြင်းအကြောင်း မပြန်ကြားနိုင်ကြောင်း ပြောသည်ဟုလည်း ဆိုသည်။
“သူတို့ကို အရေးယူလိမ့်မယ်လို့ မထင်ဘူး၊ မြန်မာတိုင်းမ် ဂျာနယ်ကလည်း စစ်အစိုးရလိုလားတဲ့ ကျမတို့က ဝေဖန်နေတဲ့ စစ်အစိုးရရဲ့ ဂျာနယ် ဖြစ်နေတာမဟုတ်လား”ဟု ၎င်းက ဆိုသည်။
Surrend အဖွဲ့သည် ယခုကြော်ငြာ မတိုင်ခင် ပြီးခဲ့သည့် ဒီဇင်ဘာလက အစိုးရအထိန်းချုပ်ခံ တဟီရန် တိုင်းစ် သတင်းစာ၌ အီရန်သမ္မတ မာမွတ် အာမက်၏ ဓာတ်ပုံအောက်တွင် “လူယုတ်မာ”ဟု အမည်ရသော စာတန်းထိုး၍ ထည့်သွင်းဖော်ပြ ခဲ့ဖူးသည်။
အလားတူ အမေရိကန်သမ္မတ ဂျော့ဘုရ်ှကိုလည်း ဝေဖန်ခဲ့သည်ဟု ဆိုသည်။“အနုပညာနဲ့ တော်လှန်ရေးလုပ်တာတော့ မဟုတ်ပါဘူး၊ အာဏာရှင်တွေကို ရယ်စရာဖြစ်အောင် လုပ်ချင်တဲ့သဘောပါ”ဟု ပီယာ ဘာတယ်လ်ဆန်က ပြောသည်။
0 comments at 11:37 PM Labels: Home Affairs
စကားဝှက်နဲ့ မြန်မာတိုင်းမ်စ်ဂျာနယ်မှာ ဖော်ပြ
ဗွီအိုအေမြန်မာပိုင်း၊ ၂၃ ဇူလိုင် ၂၀၀၇
အင်္ဂလိပ်ဘာသာနဲ့ ထုတ်ဝေတဲ့ အခုနောက်ဆုံးအပတ်ထုတ် မြန်မာတိုင်းမ်စ်ဂျာနယ်ထဲက စကန်ဒီနေးဗီးယား ခရီးသွားကြော်ငြာတခုမှာ မြန်မာစာအစိုးရကို လှောင်ပြောင်ထားတဲ့ စကားဝှက်တွေ ထည့်သွင်းထားတယ်လို့ ဒီကြော်ငြာကို ထည့်သွင်းခဲ့တဲ့ ဒိန်းမတ်အနုပညာအဖွဲ့တခုက ဖွင့်ချလိုက်ပါတယ်။ လွတ်လပ်စွာ ပြောဆိုရေးသားခွင့်တွေ ပိတ်ပင်ခံထားရတဲ့နိုင်ငံ၊ စာပေစိစစ်ရေးတင်းကြပ်မှုတွေလုပ်ထားတဲ့နိုင်ငံ ဖြစ်ပေမယ့်လို့ လွတ်လပ်စွာပြောဆိုဖော်ထုတ်နိုင်ဖို့ အနုပညာနည်းလမ်းတွေ ရှိတယ်ဆိုတာ ပြသလိုခြင်းဖြစ်တယ်လို့ ဒီအစီအစဉ်ကို လုပ်ခဲ့တဲ့ ဒိန်းမတ်အခြေစိုက် Surrend အနုပညာအုပ်စုက ပြောပါတယ်။ ဒီအကြောင်း ဦးသားညွန့်ဦးက တင်ပြပေးထားပါတယ်။
ကြော်ငြာပုံကတော့ အုံးပင်တပင်နဲ့ ပင်လယ်ရေပြင်ပုံ အပေါ်မှာတော့ နေရောင်တောက်နေတဲ့ ပုံကြမ်းကို ဖော်ပြထားပြီး စကန်ဒီနေးဗီးယားက ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသွားများ ဆိုတဲ့ ခရီးသွားဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းကြော်ညာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီစကားဝှက်တွေကတော့ ကြော်ငြာစာထဲမှာ ထည့်သွင်းထားတာပါ။ ဒီကြော်ငြာထည့်ခဲ့တဲ့ ဒိန်းမတ်အခြေစိုက် အနုပညာအုပ်စုက ဂျမ်အီဂက်စ်ဘော့ဂ် က အခုလို ရှင်းပြပါတယ်။
“ကြော်ငြာကတော့ လှပတဲ့မြန်မာနိုင်ငံကို လာဖို့ ဖိတ်ခေါ်တဲ့ ခရီးသွားကြော်ငြာပါ။ ဒီအထဲ အဓိက စကားဝှက် ၂လုံး ထည့်ထားပါတယ်။ မြန်မာစစ်အစိုးရခေါင်းဆောင်ကို သရော်ထားတဲ့ Killer
Than Shwe လူသတ်သမားသန်းရွှေ ဆိုတဲ့ စကားနဲ့ နောက်တခုကတော့ Freedom မြန်မာပြည်သူတွေအတွက်လွတ်မြောက်ရေး ဆိုတဲ့ စကားလုံး ၂လုံးပါ။ Killer Than Shwe ဆိုတဲ့ စကားလုံးကတော့ ကြော်ငြာရဲ့ အောက်ဆုံးစာကြောင်း ဒိန်းမတ်စာလိုလိုဖြစ်နေတဲ့ Ewhsnahtrellik ဆို တဲ့ စကားလုံးကို ပြောင်းပြန်လှန်ရင် တွေ့ရပါမယ်။ နောက်တလုံး Freedom ဆိုတာကတော့ ဒိန်းမတ်ကဗျာဟောင်း လို့ဆိုတဲ့ အပိုဒ်က Feel Relaxed, Enjoy Everthing, Dance On Minutes ဆိုတဲ့ စာကြောင်းက အစ စကားလုံးတွေအားလုံးကို ပေါင်းလိုက်ရင် Freedom ဆိုတာ တွေ့ပါလိမ့်မယ်။ အဓိက ကျနော်တို့ ပြောချင်တဲ့ စကားက မြန်မာစစ်ခေါင်းဆောင်ဆိုတာ လူသတ်သမား၊ နောက် မြန်မာပြည်သူတွေအတွက် လွတ်မြောက်စေလိုတယ် ဆိုတာကို ဖော်ပြလိုက်တာပါ။”
အခု ဒီကြော်ငြာ မြန်မာတိုင်းမ်စ်ဂျာနယ်မှာ ပါလာတယ်ဆိုတာကိုသိရတော့ သူတို့အနေနဲ့ အလွန်တရာ ကျေနပ် ပျော်ရွှင်မိတယ်လို့လည်း ဗီအိုအေကို အခုလို ပြောပြပါတယ်။
“ကျနော်တို့ အလွန်ဝမ်းသာပျော်ရွှင်မိပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ အဲဒီလို ဖော်ပြနိုင်ဖို့ဆိုတာ အတော့်ကို ခက်ခဲခဲ့တာပါ။ တခြားသူတွေကိုလည်း ဒီလိုအလားတူဖော်ပြချက်မျိုးတွေ လုပ်နိုင်တယ်ဆိုတာလည်း ကျနော်တို့က အားပေးချင်တယ်လေ။”
အခုလို မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဒီလို စစ်အစိုးရကို လှောင်ပြောင်တဲ့ ကြော်ငြာမျိုး ထည့်သွင်းနိုင်အောင် ဘယ်လိုစဉ်းစားမိတာလဲလို့ ကျနော် ဆက်မေးကြည့်ပါတယ်။
“ကျနော်တို့က အနုပညာနဲ့ သရော်လှောင်ပြောင်တာတွေကိုလုပ်ဖို့ စုဖွဲ့ထားတဲ့ အနုပညာအဖွဲ့ပါ။ ဒီလို အလားတူ ပြောင်လှောင်ဖော်ပြချက်တွေကို ကျနော်တို့ ကမ္ဘာအနှံ့မှာ လုပ်ခဲ့ပြီးပါပြီ။ ဒီနေရာမှာ ကျနော်တို့တွေ့လာတာက မြန်မာအစိုးရဟာ အတော့်ကို ဖိနှိပ်ရက်စက်တဲ့ အစိုးရဖြစ်တယ်၊ ဒါကြောင့် မြန်မာအစိုးရကို ပစ်မှတ်ထားလုပ်ဖို့ ရွေးခဲ့တာပါ။ ဒါပေမယ့် အခုလို စဉ်းစားချက်ရဖို့ အချိန်အတော်ယူခဲ့ရပါတယ်။ အခုဆိုရင် ကျနော်တို့က စစ်အစိုးရရဲ့ ၀ါဒဖြန့်စာတွေဖော်ပြလေ့ရှိတဲ့ မြန်မာတိုင်းမ်စ်ကို အသုံးချခဲ့ပါတယ်”
Surrend အဖွဲ့ ဆိုတာကတော့ ဒိန်းမတ်နိုင်ငံ ကိုပေဟေဂဲန်မြို့ အခြေစိုက်တဲ့ လွတ်လပ်တဲ့အနုပညာအဖွဲ့အစည်းတခု ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအဖွဲ့ဟာ အလားတူ သရော်လှောင်ပြောင်တာတွေကို အခြားကမ္ဘာ့ခေါင်းဆောင်တွေကိုလည်း လုပ်ခဲ့ဖူးပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကုန်ပိုင်းကပဲ အီရန်နိုင်ငံက သတင်းစာတစောင်မှာ အီရန်ခေါင်းဆောင်တွေကို ဝေဖန်သရော်တဲ့စာ အလားတူ ဖော်ပြခဲ့ဖူးပါတယ်။ ဒီသတင်းဟာလည်း ကမ္ဘာပေါ်မှာ အတော်လေးကို ကျော်ကြားသွားတယ်လို့ သိရပါတယ်။ - - -
( ဘလော့ဂါရဲ့ မှတ်ချက် - မင်းတရားကြီးသန်းရွှေ လိုပဲ ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကုန်ပိုင်းကလည်း အီရန်ခေါင်းဆောင်ဂျီး ခံစားခဲ့ရပါတယ်။ သူ့ပုံအောက်မှာ "swine" ဆိုတဲ့ စကားလုံးမိုင်း ကို ပေါ်တင်ကြီး ထောင်ထားတယ်။ ရုတ်တရက်ကြည့်ရင်တော့ အမေရိကန်ဆန့်ကျင်ရေးကြော်ငြာပါပဲ။ ရှေ့ဆုံး စာလုံးတွေကို ပေါင်းလိုက်မှ "swine" ဖြစ်သွားတာပါ။ အဘိဓာန်မှာတော့ "swine" ကို ၀က်သတ္တ၀ါ လို့ ဖော်ပြထားပါတယ်။ ပြီးတော့ "ယုတ်မာ ရက်စက်၍ စက်ဆုပ်ဖွယ်ကောင်းသူ" လို့လည်း ဖွင့်ဆိုနိုင်ပါသတဲ့။ ဘယ်လိုပဲ ဘာသာပြန်ပြန် အီရန်ခေါင်းဆောင်ဂျီးအဖို့ မသက်သာပါ။ သြော် - - - Surrend အနုပညာအုပ်စုရဲ့ လက်သံပြောင်ချက်ကတော့ - - - :D )
0 comments at 8:43 PM Labels: Home Affairs